Isu diiwaangelin degene - InfoFinland
U soo guurista Finland > Isu diiwaangelin degene
Marka aad u soo guurto Finland, waa in aad aadaa goobta adeegga Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka (Digi- ja väestötietovirasto) ee kuugu dhow si aad degane ahaan isaga diiwaangeliso.Waa in aad wargelinta guurista ka sameysaa xittaa guurista kummeelgaarka ah ee Finland, haddii degitaanku uu qaadanayo wax ka badan saddex bilood. Haddii aad tahay muwaadinka dal dibadda ah, waxaad sumadda aqoonsiga helaysaa, marka lagaa diiwaangeliyo nidaamka macluumaadka dadka Finland.
Sumadda aqoonsiga Finnishka
Haddii aad tahay muwaadin dal Midowga Yurub ama Waqooyiga Yurub ah
Haddii aad tahay muwaadin wadan kale
Haddii aad Finland u soo guurtay si aad joogto u degto sannad ama wakhti ka badan, waxaad xaq u yeelan kartaa guri degmo oo Finland ku yaal. Guri degmo ayaad u baahan tahay si aad u isticmaasho adeegyada magaalada ama degmada, sida daryeelka caafimaadka iyo xannaano-maalmeedka. Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka ayaa lagu gorfeynayaa in guri degmo laguu diiwaangelin karo iyo in kale.
Ka hor inta aadan imaanin hay’adda, waxaad buuxin kartaa ogeysiiska diiwaangelinta ajnabiga oo laga helo bogagga dvv.fi:n. Goobta adeegga Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka ayaad sidoo kale ku buuxin kartaa.
Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadku waxay macluumaadkaada ka diiwaan gelinaysaa hay’adda tirakoobka bulshada ee Finland. Macluumaadyadan waa tusaale ahaan magaca, taariikhda dhalashada, jinsiyadda, jinsiga iyo cinwaanka.
Marka lagaa diiwaangeliyo nidaamka macluumaadka dadka, waxaa lagu siinayaa sumadda aqoonsiga Finnishka, Sumadda aqoonsiga waxaad ka heleysaa Hoggaanka socdaalka, marka lagu siiyo sharciga degenaansha Finland ama marka la diiwaangeliyo xaqaada joogitaanka.
Sumadda aqoonsiga iyo diiwaangelinta waxaad ka codsan kartaa:
xafiiska canshuuraha, haddii aad canshuur darteed u baahan tahay sumadda
Wakiilka Finland ee dibadda, haddii aad halkaas ka xareysatay codsiga oggolaansha degitaanka
Sumadda aqoonsiga Finnishku waa taxane dheer oo ka kooban 11 nambar kaaso o ka sameysma taariikhda dhalashadaada iyo jinsigaaga. Sumadda aqoonsiga waxaad ugu baahnaan kartaa tusaale ahaan shaqo-bixiyahaada ama machadkaada waxbarashada. Wuxuu sidoo kale fududeeyaa ka daneysashada kala duwan ee hay’adaha dowladda.
Haddii aad sumadda aqoonsiga ka heshay meel aan aheyn Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka islamarkaasna aad u baahan tahay guri degmo, waa in aad mar kasta tagtaa goobta adeegga ee Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka. Ka aqri macluumaad dheeraad ah bogga InfoFinland Guri degmo ee gudaha Finland.
Ku xisaabtan, in ka diiwaangelinta goobtaada deegaanka nidaamka macluumaadka dadka ee Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka ay ka duwan tahay diiwaangelinta uu Hoggaanka socdaalku sameeyo. Haddii aad tahay muwaadin Midowga Yurub ah islamarkaasna aad doonayso in aad Finland joogto wax ka badan saddex bilood, waa in aad sidoo kale tagtaa Hoggaanka socdaalka islamarkaasna aad ka diiwaangelisaa xuquuqdaada joogitaanka Finland. Faahfaahin dhereeraad ah ka sii aqri bogga InfoFinland Diiwaangelinta xaqa joogitaanka muwaadinka Midowga Yurub.
Haddii aad tahay muwaadin Waqooyiga Yurub oo aadna Finland u soo guureyso, waa in aad samaysaa wargelinta guuritaanka islamarkaasna aad tagtaa si aad isaga diiwaangeliso goobta adeegga Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka ee kuugu dhow. Samee wargelinta guuritaanka ugu dambayn todobaad kaddib maalinta aad soo guurtay. Faahfaahin dheeraad ah ka aqro bogga InfoFinland Muwaadiniinta u dhashay wuqooyiga Yurub.
Marka aad aadeysid goobta adeegga ee Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka, horay u soo qaado ugu yaraan dokumiintiyada soo socda:
baasaboor shaqeynaya ama aqoonsi kale oo ay ka muuqato jinsiyaddu
shaqada, shahaadada waxbarashada ama cadeyn kale oo ay diiwaangelintu u baahan tahay (haddii aad tahay muwaadin Midowga Yurub welina aadan Hoggaanka socdaalka ka diiwaangelin xaqaada joogitaanka dalka)
shahaadada guurka ee asalka ah (haddii aad guursatay)
shahaadooyinka asalka ah ee dhalashada carruurta (haddii aad leedahay carruur 18 sano ka yar, kuwaas oo Finland u soo guuraya)
ogow in lagaa rabo in aad shaciyeyso dukumentiyada ay bixisay hay’ad kale oo aan ka tirsaneyn dal Midowga Yurub ama Waqooyiga Yurub ah. Tusaale ahaan haddii aad heysato shahaadada guurka ee lagaa siiyay Mareykanka.
Haddii aad tahay muwaadin wadan kale aadna doonayso in aad Finland u soo guurto, waxaad u baahantahay sharciga deganaanshaha dalka. Waa in sharciga deganaanshaha codsataa kahor inta aadan Finland imaan. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan sharciyada deganaanshaah ka aqri bogga InfoFinland Aan aheyn muwaadin EU.
Marka aad hesho go’aanka sharciga deganaanshaha oo oggolaansho ah islamarkaasna aad Finland u soo guureyso, waa in aad tagtaa goobta adeegga ee Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka ee kuugu dhow si aad degane ahan isaga diiwaangeliso.
sharciga degenaanshaha (haddii sharciga degenaanshaha aad Finland ugu baahan tahay)
haddii loo baahdo caddeynta shaqada Finland laga qabanayo ama waxbarashada ( tus. heshiiska shaqada ama shahaadada joogitaanka ee ay goobta waxbarashadu bixisay) ama caddeyn kale oo lagu sababeynayo diiwaangelinta
shahaadada guurka ee asalka ah oo la sharciyeeyay (haddii aad guursatay)
shahaadooyinka asalka ah ee dhalashada carruurta oo la sharciyeeyay (haddii aad leedahay carruur 18 sano ka yar, kuwaas oo Finland u soo guuraya)
Waa in Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka tustaa dukumentiga asalka ah ama nuqulkiisa oo si lagu kalsoonaan karo loo caddeeyay saxnimadiisa. Nuqulka waxaa saxnimadiisa si lagu kalsoonaan karo u caddeyn kara hay’adda bixisay dukumentiga ama nootaayada guud ee dalkaas.
Si Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadku ay ugu qorto macluumaadkaada nidaamka macluumaadka dadka, dukumentigu waa in uu ahaadaa mid la shirciyeeyay. Haddii uu dalkaadu ku biiray heshiiska caalamiga ah ee Hague, u samee dukumentigaada shahaadaa Apostille.
Uma baahnid shahaadada Apostille, haddii aad heysato dukumenti guud oo ay bixisay hay’ad ka tirsan wadan Midowga Yurub ah. Si kastaba ha ahaatee waxaad dokumentiga guud in aad ku lifaaqdo u baahan kartaa foomamka istaandarka ah ee loo kaalmeysto turjumaadda. Foomamkan istaandarka ah waxaa weydiin kartaa hay’adaha dowliga ah ee dalkaada oo aad caddeynta ka codsaneyso. Waxaa kale oo beddelkeeda la sameyn karaa in dukumentiga uu turjumo turjubaan ka sharciyeysan wadan Midowga Yurub ah.
Ogow in dukumentigu uu ku qornaado luqada Finnishka, Iswidhishka ama Ingiriis. Haddii uu dukumentigaadu ku qoran luqad kale, waa in aad ku dadaashaa in loo turjumo Finnish, Iswidhish ama Ingiriis. Dukumentiga waxaa turjumi kara turjubaan qoraal oo rasmi ah. Haddii turjumista lagu sameeyay dibadda, turjumaadda xittaa waa in la sharciyeeyaa.
Haddii aad u baahan tahay macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sida aad u sharciyeyn karto dukumentiga, la xiriir Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka ama wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaada.